Inhloko ZeNdaba Mpanduila 4, 2020
Idolobho leHarare, lokhu likhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlolwe batholakala beleCovid 19, sebezinkulungwane phose ezintathu-2,555, lilandelwa yiBulawayo elenkulungwane edlula kancane eyodwa-1,289. E-Zimbabwe, jikelele asebetholakele beleCovid 19, sebezinkulungwane phose eziyisikhombisa-6,678.
UMongameli Emmerson Mnangagwa ugcizelele amazwi akhe okuthi akulahlupho eZimbabwe namuhla ekhuluma emhlanganweni wePOLAD eHarare, lapho ahlangane khona labakhokheli bamabandla amancane akulumanyano. Unxuse njalo amabandla angekho kulumanyano afana leMDC Alliance ukuthi angene kuwo ukuze kukhulunyiswane. Wengeze wathi inkinga ezingaba zikhona elizweni zidinga ukubambana kwabantu kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla ukuze zilungiswe.
Elinye icele labalwa impi yenkululeko, luthi luyasekela isinqumo esithethwe nguhulumende sokubhadala abaniniphulazi abamhlophe abathathelwa imphahla yabo phansi kohlelo lokwaba kutsha umhlabathi, olweLand Reform Program.
Osomabhizimusi abathenga bethengisa labalungisa impahla ezehlukeneyo eZimbabwe, bakhala ezimathonsi ngemva kokwehluleka ukuthola imali abayithenjiswa nguhulumende yokubancedisa ngesikhathi ilizwe limelana leCovid-19, bethi sebelinde baze badela ngoba okwamanje amabhizimusi abo adonsa nzima buye ezomnotho azimanga kahle ezweni.
KuWoza Friday liviki silomculi osacathulayo, ohamba ngegama lokuthi Godknows Vimbelela, kodwa elakhe lokuzalwa kungu Petros Thembelani Ncube edabuka enyakatho yeMandebeleni, njalo ucula umdumo we Dance Hall.
Ku Livetalk namhlanje sikhangela umhlangano womanyano wamabandla ezombusazwe owePOLAD, ukhokhelwa nguMongameli Emmerson Mnangagwa kanye lemizamo enziwa ngabeSouth Africa ukudinga isisombululo kunxaki ezibhekane leZimbabwe.